Mayelana NATHI - Jiangsu Mole ELectronic Technology Co., Ltd.
SIYAKWAMUKELA KWE-MOLE MEDICAL
Ukunamathela kumqondo "wesayensi nobuchwepheshe kungumqondo wokuqala wokukhiqiza", iMole Medical inezikhungo ezimbili ze-R & D eXuzhou, eShenzhen, ngaphezulu kwezingcweti ezingama-50 zochwepheshe abangochwepheshe bezokwelapha, izikhungo zocwaningo lwesayensi, kanye namanyuvesi aphezulu emhlabeni wonke ukuletha izixazululo ezintsha ngokuya ngemitholampilo izidingo nempendulo, njenge-Chinese PLA General Hospital, iNanjing University of Aeronautics ne-Astronautics, i-China University of Mining and Technology, i-Xuzhou Medical University.
IMole Medical ingumnikazi welabhorethri enkulu kunazo zonke esezigabeni ezingama-100,000, indawo yokusebenzela yokukhiqiza, ilabhorethri yokukhiqiza edolobheni laseXuzhou. Njengesazi sokuphathwa komoya, sinikela nge-Video Laryngoscope (enezinhlamvu zesiteshi, ezisebenzisekayo / ezilahlwayo), i-Video Stylet, i-fiber optic laryngoscope, i-Flexible Bronchoscope (evuselelekayo / elahlwayo), i-Video Otoscope nokunye.
Ngeminyaka yobungcweti, sethenjwa eminye yemikhiqizo nezinkampani ezidume kakhulu emkhakheni wobungcweti. Sitshala kakhulu ucwaningo nentuthuko futhi sinamalungelo obunikazi bethu. Sinikezela ngempahla esekela imishini, siqapha isimo nokusetshenziswa kwamakhasimende, futhi sithuthukisa nokuhlinzekwa kwamakhasimende.
Siyakwamukela ukukhetha imikhiqizo kuwebhusayithi yethu, noma wabelane ngemicabango yakho nathi, singakunika amasampula. Uma udinga usizo ngenkathi upheqa ukukhetha kwethu okubanzi, sicela ukhululeke ukuxhumana namalungu eqembu lethu ngocingo noma nge-imeyili. Abasebenzi bethu banamava eminyaka ekuqondiseni amakhasimende, futhi bahlala bezimisele ukusiza. Thenga manje ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zakho!
Sine iminyaka engaphezu kwengu-20 yokukhiqiza isipiliyoni. Ikhwalithi yokukhiqiza iphezulu. Sinokuhlangenwe nakho okucebile kokukhiqiza, amandla amakhulu wezobuchwepheshe nemishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme.
“Izinga eliphezulu, amanani aphansi kanye nensizakalo esezingeni eliphakeme emva kokuthengisa” kungumgomo wethu, “Ukwaneliseka Kwamakhasimende” umgomo wethu waphakade; Imikhiqizo yethu iye yaziwa kabanzi ezimakethe eziningi ekhaya nasemhlabeni jikelele.
Imikhiqizo esezingeni eliphakeme, amanani entengo atholakalayo, izinto ezintsha neziphansi.
Ekupheleni kuka-2020, iMole Medical isithengisele amazwekazi ama-5 (amazwe nezifunda ezibandakanya i-US, Canada, Germany, South Korea, United Arab Emirates, South Africa njll.)